Yiba Uvavanyo lomsebenzi-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Zonke iibhodi ziya kuvavanywa ngokusebenzayo kwi-100% kwi-factory ye-Fumax.Iimvavanyo ziya kwenziwa ngokungqongqo ngokwenkqubo yovavanyo lwabathengi.
Ubunjineli bemveliso yeFumax buya kwakha uvavanyo kwimveliso nganye.Uvavanyo luza kusetyenziselwa ukuvavanya iimveliso ngokufanelekileyo kunye nokusebenza kakuhle.
Ingxelo yokuvavanya iya kuveliswa emva kovavanyo ngalunye, kwaye yabelwane kumthengi nge-imeyile okanye ilifu.Umthengi unokuphonononga kwaye alandele zonke iirekhodi zovavanyo kunye neziphumo zeFumax QC.
I-FCT, ekwabizwa ngokuba luvavanyo oluSebenzayo, ibhekisa ngokubanzi kuvavanyo emva kokuba iPCBA ivuliwe.Izixhobo ze-Automation FCT ubukhulu becala zisekwe kwi-hardware evulekileyo kunye noyilo loyilo lwesoftware, enokuthi ngokulula yandise i-hardware kwaye ngokukhawuleza nangokulula ukuseka iinkqubo zovavanyo.Ngokubanzi, inokuxhasa izixhobo ezininzi kwaye inokumiswa ngokuguquguqukayo kwimfuno.Kufuneka kwakhona ibe neeprojekthi zoVavanyo ezisisiseko ezityebileyo zokubonelela abasebenzisi ngesisombululo sehlabathi jikelele, esithambileyo nesisemgangathweni ngokona mlinganiselo mkhulu kunokwenzeka.
1. Ingaba iFCT ibandakanya ntoni?
I-voltage, okwangoku, amandla, amandla, i-frequency, umjikelezo womsebenzi, isantya sokujikeleza, ukukhanya kwe-LED, umbala, umlinganiselo wesikhundla, ukuqaphela umlingiswa, ukuqondwa kwepateni, ukuqondwa kwelizwi, ukulinganisa ubushushu kunye nokulawula, ukulawula umlinganiselo woxinzelelo, ulawulo oluchanekileyo, iFLASH, EEPROM inkqubo ye-intanethi, njl.
2. Umahluko phakathi kwe-ICT kunye neFCT:
IFlex PC IRigidFlex Pcb IPcb enamacala amabini IPcb Fabrication kunye neNdibano Ibhodi yeSekethe eprintiweyo Odm PCba